तीन वर्षपछि काभ्रेपलाञ्चोकमा कानूनी शिक्षा अभियान ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तीन वर्षपछि काभ्रेपलाञ्चोकमा कानूनी शिक्षा अभियान !
फागुन १४ गते, २०७६ - ११:३२
काभ्रेपलाञ्चोक । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई करिब तीन वर्षपछि नेपाल बार एशोसिएशन काभ्रेपलाञ्चोक एकाइले ‘कानुनी शिक्षा’ अभियान थालेको छ । एकाइले यो सातादेखि तेमाल गाउँपालिकाबाट कानूनी शिक्षा अभियान थालेको हो ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा समन्वय गर्दै संहिता–२०७४ तथा स्थानीय तहमा बनेका कानूनका विषयमा वडास्तरका जनप्रतिनिधि एवं स्थानीयलाई जानकारी गराइने एकाइ सचिव मदुसुदन वाग्लेले बताए । “अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई नयाँ संहिता र स्थानीय बासिन्दालाई आफ्ना कानूनबारे जानकारी नहुँदा अभियान नै थाल्नुपर्ने आवश्यकता देखियो”, उनले भने । उनका अनुसार अभियानको पहिलो चरणमा बारका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिको संयुक्त बैठक राखी कानूनी साक्षात्कार गरिने तथा पृष्ठपोषण दिइनेछ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (न्यायिक समितिका पदाधिकारीसहित)सँग साक्षात्कारपछि वडास्तरमा कानूनी शिक्षाको योजना बनाइनेछ । स्थानीय तह पनि आफ्नै कानून निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा स्थानीयवासीलाई समेत कानूनी सचेतना गराउनुपर्ने भएकाले बारको समन्वयमा कानूनी शिक्षा कार्यक्रमको योजना बनाइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुर्गामाया तामाङले बताइन् । उनले भनिन्, “अब स्थानीय बासिन्दालाई नयाँ संहिता र पालिकाको कानूनबारे जानकारी दिनु अत्यावश्यक भइसक्यो ।”
उपाध्यक्ष तामाङले गाउँपालिकामा अवस्थित विद्यालयमा पनि संहिता र स्थानीय तहको कानूनबारे शिक्षा दिनुपर्ने बताएकी छिन् । “कानूनी शिक्षा विद्यार्थीको प्राथमिकतामा राख्दा बहुउपयोगी देखिन्छ, विद्यार्थीले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई कानूनबारे सचेत गराउँछन्”, उनले भनिन् । उनका अनुसार तेमालमा ६१ मेलमिलापकर्ता र तीन न्यायिक समितिका पदाधिकारीले न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन् ।
एकाइसँग समन्वय गरी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा बासिन्दालाई न्यायिक शिक्षा प्रदान गर्न आफू तयार रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सलामसिं तामाङले बताए । उनले भने, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ बारे पनि स्थानीयवासीलाई जानकारी गराउँदा न्याय सम्पादनमा सजिलो हुन्छ, कानूनसँगै सरकार सञ्चालनबारे जानकारी अत्यावश्यक देखियो ।” गाउँसभामार्फत हालसम्म सात ऐन, नियम र कार्यविधि तयार गरिएको उनले बताए । “थप कानून बनाउन बारसँग समन्वय गर्दै जानेछौँ”, उनले भने ।
मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समितिका पदाधिकारीले स्थानीयस्तरमा कानूनी सेचतना गर्न नभ्याइरहेको अवस्थामा ढिलोगरी भए पनि ‘कानूनी शिक्षा’ अभियान थालिएको वाग्लेले बताए। “तेमालबाट अभियान शुरु गर्याै, क्रमैसँग अन्य पालिकासँग समन्वय गर्दै जानेछौँ”, उनले भने । काभ्रेपलाञ्चोकमा छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् ।
फागुन १४ गते, २०७६ - ११:३२ मा प्रकाशित